LOZA AN-DRANOMASINA SY RANOMAMY : Nofantarina ireo tompon’andraikitry ny famonjena
Tranga maromaro no efa niseho hatramin’ny niandohan’ny taona sy vanim-potoana fahavaratra teto Boeny. 13 mars 2019
Nivory tao amin’ny kaominina ireo tompon’andraiki-panjakana misahana ireo karazana loza mety miseho eny anaty rano sy nijery ny andraikitry ny tsirairay raha misy loza. Nohamafisina tamin’izany fa ny APMF dia mikarakara mikasika ny fitaovana rehetra misehatra an-dranomasina sy ranomamy, na sambo na lakana na teufteuf, mpanjono na mpitatitra olona sy entana. Izy ireo no misahana ny Fiarovana sy famonjena ireo mpiandriaka raha misy loza.
Ho an’ireo mpilalao rano sy mpilomano kosa dia ny mpamonjy voina ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga no tompon’andraikitra amin’ny famonjena raha misy loza. Lasa olana ho an’ireo mpamonjy voina anefa ny antso sandoka. Tonga izy ireo mamonjy nefa tsy misy ninoninona akory. Isaky ny mihetsika anefa izy ireo dia efa misy fandaniana izay. Tokony hofantarina ny APMF sy ny laharana findainy. Efa miezaka mampahafantatra ny toetr’andro ireo mpiandriaka ny APMF. Ireo miantsona eo amin’ny seranana sy quai orange no tena fantatr’izy ireo. Betsaka anefa ny seranana eto Mahajanga toy ny pont fitim, buses, Aranta, Maroala, Amborovy ary tonga hatrany izy ireo rehefa misy ny fiantsoana saingy tokony hambara mazava kosa ny toerana nisian’ny loza mba tsy hisian’ny fandanialaniam-poana.